Nwuo na Apple maka ịrụ ọrụ batrị. Companylọ ọrụ ahụ na-edozi ịgbakwunye bọtịnụ iji bulie arụmọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Na anyị na-ekwu maka izu ole na ole banyere nsogbu arụmọrụ na iPhone kpatara iOS 11 echichi na batrị nke na-adịkwaghị n'oge kachasị mma, ya bụ, ha abụkwaghị ọhụụ na enweghị ike ịnye ahụmịhe ahụ dị mma na nnwere onwe, ntụkwasị obi na ike na ihe ndị dị n'ime dịka nhazi.
Apple mere ka m hụ ụzọ "ọhụụ na ọ bụghị ezigbo uzo" site na ịbelata iPhone n'oge batrị ahụ malitere idafu ihe (dịka ọ na-eme na batrị niile nke ngwaahịa niile) yana mgbe akụkọ bipụtara nke atọ na Kedu Egosiri iPhone iji belata arụmọrụ na oge bịara bụrụ nnukwu nkatọ.
Ndị si Cupertino gafere akụkọ ahụ obere oge mana n'ikpeazụ ha ga-anakwere eziokwu ma gosipụta na ha agbadata arụmọrụ ha iji kpuchido gị na kọmputa site na-atụghị anya reboots nakwa dị ka nwere nsogbu na esịtidem mmiri.
1 Mmemme mgbanwe batrị
2 Apple na-emezigharị obere obere ma na-agbakwunye bọtịnụ
Mmemme mgbanwe batrị
N'echiche a, ozugbo egosiri nsogbu ahụ, ihe ndị mbụ chọrọ sitere n'aka ndị ọrụ na Apple na-amanye ịgbanwe batrị nke ọrụ na-achọ ya 29 euro. Nke a bụ ụzọ iji kwụọ ụgwọ nke nwere ike ịmalite na mbido site na ịdọ aka ná ntị ndị ọrụ na nke a nwere ike ime ma ọ bụ ọbụna nye ha ohere ịhọrọ iweda arụmọrụ ahụ ma ọ bụ ịnọnyere nsogbu ndị a enwere ike karịa ọtụtụ afọ.
Niile na-eme ka o doo anya na Apple na ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla nke na-eji batrị ga-aka oge na nke a mechie na-enye ahụmịhe na-adịghị mma n'ihe gbasara arụmọrụ ma ọ bụ ndụ batrị na akụrụngwa.
Apple na-emezigharị obere obere ma na-agbakwunye bọtịnụ
A ga-etinye bọtịnụ ahụ n'ime sistemụ wee nwee ike ịsị na ọ bụ mmezi ọzọ nke ika ahụ, karịa ihe niile ndị ọrụ Apple agaghị echetụ n'echiche ga-eme. Companylọ ọrụ ahụ "na-enye" ​​ntakịrị ihe ịkatọ maka esemokwu batrị ahụ ma ugbu a ga-enye onye ọrụ ohere ịhọrọ ma ọ chọghị iwelata arụmọrụ nke iPhone mgbe batrị ya nwere oge iji ya yana ike ya dị ala. O doro anya na ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe batrị maka euro 29 ndị ahụ ị nwere ike ime ya, ma ugbu a, a na-agbakwunye bọtịnụ a na iOS iji chịkwaa onwe gị ma ịchọrọ ịdalata iPhone ka ihe ndị dị n'ime ya ghara ịta ahụhụ.
O doro anya na nke a Ọ ga-abụ mkpebi onwe onye yana Apple a chọrọ ibelata ọnụego mkpesa, ikpe na okwu ọjọọ ha na-enweta ebe niile ụbọchị a na batrị batrị. N'ụzọ dị otú a, onye nwe iPhone ga-ahụ maka ịhọrọ ma ọ chọrọ iweda arụmọrụ kọmputa ya ma ghara ịta ahụhụ na-atụghị anya ya, nkwụsịtụ oge niile na nnwere onwe, wdg, ma ọ bụ iji jiri ya mee ihe mgbe niile, na-ewere ihe egwu na nke a gụnyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Nwuo na Apple maka ịrụ ọrụ batrị. Companylọ ọrụ ahụ na-agbazi site na ịgbakwunye bọtịnụ iji bulie arụmọrụ
Ihe Amazon na-adọrọ mmasị na-enye maka taa (18-01-2018)